Iziko loLwazi |
Loluphi uhlobo lwengca olusetyenziswa ebaleni lebhola
Loluphi uhlobo lwengca olusetyenziswayo ebaleni lebhola ekhatywayo Ingca eyenziweyo yaziswa kumabala ebhola ukusukela ngeminyaka yee-1970. Kwiindawo zeminyhadala ephezulu, abaququzeleli abazizityebi kunye neyona f ...
Izidingo zokwakha zokubeka i-turf yokufakelwa kwinkundla yebhasikithi
Iimfuneko zokwakha zokubeka i-turf eyenziweyo kwinkundla yebhasikithi Izinto eziyimfuneko ekwakhiweni kwenkundla yebhasikithi: Eyona nto ibaluleke kakhulu kukulawula icala lokuhambisa amanzi kunye nokuthamba kwenkundla, kwaye ukhumbule ukuba kufanelekile ...
Ungayikhetha njani i-turf eyenziweyo
Ungayikhetha njani i-turf eyenziweyo ukuba i-turf eyenziweyo yahlulwe kumbono wetekhnoloji yokuvelisa, inokwahlulahlulwa ibe yirff eyenziweyo yenaliti kunye ne-turf eyenziweyo, ke iindlela zabo zemveliso zahlukile, kodwa ...
Izinto ezininzi ezibangela umahluko wombala we-turf eyenziweyo
Izinto ezininzi ezibangela umahluko wombala we-turf eyenziweyo I-Chromatic aberration yingxaki eqhelekileyo yomgangatho we-turf yokufakelwa, kunye nokuchithwa kwe-chromatic kunokubonakaliswa ngeendlela ezininzi. Esona sizathu siphambili somahluko wombala ngu ...
Yintoni ekufuneka ihlawulwe xa kusenziwa izinto kwi-turf eyenziweyo
Yintoni ekufuneka ihlawulwe xa imisebenzi kwi-turf engeyiyo ndiyakholelwa ukuba abantu bahlala beya kumabala emidlalo okanye kwiipaki nakwezinye iindawo kubomi babo bemihla ngemihla. Ngaba uyazi ukuba kufuneka kuhlawulwe ngantoni kwizinto ezenziwa kwi-turf eyenziweyo? 1. Ndi ...
Uyakha njani i-turf eyenziweyo yasenkulisa
Uyakha njani i-turf engeyiyo eyasenkulisa Kwii-kindergartens zale mihla, abantwana baye bavalelisa ixesha leendawo zokudlala ze-turf zendalo okanye amabala okudlala esamente, kwaye bangena kwixesha lokusebenzisa iindawo zokudlala ze-turf ezingezizo. Iyadlala ...
Izinto eziluncedo ze-turf ekhethekileyo yokufakelwa enkulisa
Izinto eziluncedo ze-turf ekhethekileyo yokufakelwa enkulisa okwangoku, zininzi i-kindergartens e-China, kwaye abazali baneemfuno eziphezulu neziphezulu zokusingqongileyo kwi-kindergartens. Ke ngoko, uninzi lweenkulisa sele luqalisile ukubeka ubugcisa ...
Iingxaki eziqhelekileyo kulwakhiwo lwe-turf engeyiyo kwi-kindergartens
Iingxaki eziqhelekileyo kulwakhiwo lwe-turf eyenziweyo kwiinkulisa. Abo bathathe inxaxheba kulwakhiwo lwe-turf eyenziweyo kufuneka bazi ukuba umgangatho wokugqibela wokusetyenziswa kwe-turf awuhambelani kuphela nomgangatho wemveliso uqobo, ...
Zithini iinkqubo zokwakha i-turf eyenziweyo kwiinkulisa
Zithini iinkqubo zokwakha i-turf eyenziweyo ezikolweni zabantwana abancinci 1. Ubunjineli obuyisiseko Umaleko wokuqala wesiseko ubekwa kubaluleke kakhulu, kwaye iinkcukacha ezininzi akufuneki ziphoswe. Okwangoku ...
Imicimbi efuna ingqwalaselo kulawulo lwe-turf engeyiyo kwi-kindergartens
Umahluko phakathi kwengoma yomnyama yokulinganisa ye-turf enkulisa kunye nezinye iitrf eziqhelekileyo Ulawulo ikakhulu lubandakanya ukuphathwa kwezixhobo ezizodwa kunye ne-turf eyenziweyo enkulisa. 1. izixhobo ezizodwa izixhobo ezikhethekileyo ...
Umahluko phakathi kwengoma yomnyama yokulinganisa ye-turf enkulisa kunye nezinye iitrf eziqhelekileyo
Umahluko phakathi kwetrafikhi yomlinganiso wobumbano womdlalo wobuyiselo enkulisa nakwenye i-turf eqhelekileyo I-turf ekhethekileyo yokufakelwa kweenkulisa, njengoko igama lisitsho, yi-turf ehlangabezana neemfuno ezizodwa zeenkulisa. Ine-c ethile ...
Ungayikhetha njani ingca yasenkulisa
Ungayikhetha njani ingca yasenkulisa yasesikolweni yasenkulisa yintsimi yesicelo esomeleleyo ye-turf eyenziweyo. Kanye njengokuba ingca yebhola ekhatywayo iye yasisixhobo esifanelekileyo kumabala emidlalo esikolo, i-kindergarten turf nayo iye yema ...
Ingca yokwakheka komhlaba yokuBekwa komhlaba, Ingca yeGalufa eyenziweyo, Ingca eyenziweyo, Umhlaba webhola ekhatywayo we-Astro Turf, Ukuxelisa Ikhaphethi Yengca, Ingca yebhola eTurf,